IWholeliseli ZXG Series of Central Transimission Mud Scraper Manufacturer kunye noMboneleli |JINLONG
Indawo enqunyanyisiweyo yokukhuhla udaka iqulunqwe ikakhulu yindlela yokuthoba isantya, ishafti yothumelo lwamandla, udonga lokukhuhla, indawo ephantsi kwamanzi kunye netanki yokuqokelela udaka.Umthwalo we-scraper yonke yodaka usebenza kumbindi webhulorho esebenzayo egqitywe kwidayamitha yedama.
Amanzi akrwada aqukuqela ngokukhawuleza ukuya kwitanki yokuphuphumayo ejikeleze idama emva kokuba esasazwe ngomgqomo osembindini wokuhambisa amanzi.Ngokuhla kwesantya sokuhamba, iziseko ezimisiweyo kumzimba wamanzi ziyahlukana kwaye zihlaliswe emazantsi echibini, eziqhutywa kwaye zinqunyanyiswe yi-deceleration.
I-sludge iyachithwa kwaye iqokelelwe kwi-tank ephakathi yokuqokelela i-sludge nge-scraper kwaye ikhutshwe ngaphandle kwetanki ngoxinzelelo lwe-hydrostatic okanye impompo.
Isakhiwo esilula kunye nokugcinwa ngokufanelekileyo kunye nolawulo.Ukusebenza okuzinzileyo, ukusebenza okukhuselekileyo nokuthembekileyo.
Isiphumo sokukhuhla kunye nokuqokelela i-sludge silungile, kwaye umxholo womswakama we-sludge okhutshiweyo uphantsi.
I-ZXG inqunyanyisiwe i-central drive mud scraper ilungele ukukhuhla, ukuqokelela kunye nokukhupha i-sludge ukusuka kwi-radial flow (setyhula) iitanki zentlenga ezinobubanzi obungekho ngaphezu kwe-20m kwizityalo zamanzi okanye kwiindawo zokucocwa kogutyulo kunikezelo lwamanzi kunye neeprojekthi zokuhambisa amanzi.Imveliso iphumelele uvavanyo lwephondo.Kukhethwa ukuba kucetyiswe iimveliso kwi-Bureau yoLawulo lobuGcisa yoMphathiswa wolwakhiwo kunye noMphathiswa woomatshini beKhomishini yeSayensi kunye neTekhnoloji yeSizwe.
Idayamitha yedama esebenzayoΦ(m)
Umjikelo wokuhamba ngesantya somgca (m/mi)n
Inani leendonga ezikhutshiweyo
Layisha macala omabini(NK)
Itanki yokuqalisa intlenga yesibini
Ngaphambili: I-Shaftless screw conveyor, izixhobo zokuhamba
Okulandelayo: Uhlobo lwe-ZBG lwe-Peripheral Transmission Mud Scraper
Inkqubo Yokucoca Amanzi PVDF Ultra-Filtration...
I-Shaftless screw conveyor, izixhobo zokuhamba...